COVID-19 kushushikana? Kufamba sei kuNepal kunogona kubatsira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » COVID-19 kushushikana? Kufamba sei kuNepal kunogona kubatsira
Kuputsa Kufamba Nhau • LGBTQ • Nepal Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tourism kuNepal inogona kureva zvakawanda kupfuura kukwira Mout Everest muNepal.
Mumwe chete pavanhu vatatu muUnited States achisangana nepfungwa panguva yedambudziko re COVID-19. Kudzokera kumashure kune iwe pachako, kuwana mukati-rugare, uye kuongorora kugona mukati medu ndizvo izvo niche mukushanya inogona kureva kune zera idzva revafambi. Lord Budda anogona kubatsira nazvo, uye Nepal ndiyo nzvimbo yekuzvarwa.
Izvi zvinogona kudaro zvakadaro kumirira sezvo miganhu yeNepal parizvino yakavharwa kushanya. Mishumo isina kusimbiswa inoti izvi zvinogona kuchinja mushure maGumiguru 16
Nhasi Pankaj Pradhananga arikugovana ruzivo rwake paakashanyira nharaunda yechiBuddha uye nekuzviparadzanisa nevamwe nechinangwa chekuwana runyararo rwake rwemukati.
Pankaj Pradhananga anouya neruzivo muindastiri indasitiri kweanopfuura makore makumi maviri. Anobata MBA kubva kuKathmandu University Chikoro cheManagement (KUSOM) ine hunyanzvi muCRM (Kushambadzira).
Iye Director weChina Mwaka Yekufamba & Kuratidzwa, charter Mutungamiri we Tourism Toastmasters Club, Area Director weA6 muRuwa 41, uyezve adjunct fakaroti nhengo kuACE Institute of Management muKathmandu. Anofungidzirwa kuve piyona wezve Inclusive Tourism zvirongwa mudunhu reHimalaya. Vakataura mumusangano / misangano yakawanda pamusoro pekushanya zvine mutsindo uye vakapa hurukuro dzevaenzi muNepal, Europe, neU.SA.
Pankaj akaongorora chimwe chinhu chingashanyirwa nemushanyi - uye hazvifanirwe kutora mari yakawanda. Dzvanya apa kuti uwane zvimwe paPankaj
Zvinyorwa zvinogadzirwa (zvikanganiso zvakasanganiswa)
Namaste uye Aloha. Zita rangu ndinonzi Juergen Steinmetz. Ndiri kukushandura kubva parutivi rwenzvimbo yekufamba muHonolulu, Hawaii. Uye neni ndine shamwari yangu yakanaka. Ndinoziva kwemakore mazhinji, mazhinji, hazvireve kuti isu tachembera, asi ndinozivaPankaj mazhinji, makore mazhinji, handikwanise kududza zita rako rekupedzisira. Saka uchatiudza zita rako rekupedzisira, asi ari kubatana nesu kubva kune imwe yenzvimbo dzandinoda kwazvo pasi pano. Ari kubatana nesu kubva kuNepal. Iyo inzvimbo yekuti munhu wese muhupenyu hwake anofanirwa kuona kamwechete nguva ini ndinofanira kubvuma kuti handina kumbobvira ndaona Mount Everest nekuti kwaive nemakore. Saka ini ndinofanirwa kuramba ndichidzoka kuzonyatsoona is, asi ndakazviona kubva mundege.
Saka ndizvozvo, zvinoshamisa, asi zvese zviri muNepal zvakati siyanei zvishoma pane mune mamwe matunhu epasi. Uye Pankaj, inomhanya nekambani, inbound yekushanya inofambiswa nezita reZviitiko zveMwaka. Ane ruzivo, uye nevafambi vekuAmerican uye anga achizviita kwemakore mazhinji, uye, uh, anga ari COVID uye zvese zvimwe zviri kuitika pasi rose. Pano pane zvikonzero zvakawanda zvekuenda kuNepal, kunyangwe panguva dzino. Uye hakusi kukwira makomo kwese uye kune nzira yakawanda mairi. Iye achatiudza zvishoma nezvake uye, uye, iyo nzira nyowani yekuongorora Nepal kubva kune yemukati mega.
Aloha Mahalo. Uye ndinokutendai. Sezvawataura, iwe wakasvika kuNepal kanoverengeka, asi hauna kukwanisa kuona Mount Everest. Uye izvi zvinondiyeuchidza 1923, New York times, mutori wenhau anga achigadzirira kuyedza kwake kwechitatu kukwira Mount Everest 1923. Saka paakabvunzwa kuti sei aida kukwira Mount Everest, mhinduro yake yaive yakapusa. Mumashoko matatu, akadaro, nekuti chiripo. Mallory haana kuti ini ndiri akakunda Mountaineer kana ini ndaida kugutsa hunhu hwangu kuti ndive wekutanga pamusangano. Akangoti, ndinoda kukwira Everest nekuti iriko. Saka iwo mutongo wakave unotungamira mantra kune vanhu vazhinji, vaongorori, vanotsvaga, vatengesi vanotora njodzi. Saka nei Nepal kana iyo nyaya yeHimalaya zvinhu zvisiri zvenguva yakapusa yezororo. Hongu. Sezvawataura, zviripo, uye inogona kunge iri nzvimbo yekutanga kwerwendo rwemukati rwevazhinji, zvinosuwisa, uyu anokwira muna 1923 haana kukwanisa kuzviita kechitatu.
Akarasikirwa nehupenyu hwake, asi akazova gamba chairo kudzamara mutumbi wake wawanikwa muna 1999. Uye zvimwe zvese nhoroondo. Kana iwe ukatarisa pane nhoroondo yekufamba, pamwe mukutanga, ehe, zororo rekufamba kana kufamba nechinangwa chekusangove kuva wega vapenyu chaive chekufambira, handiti? Kunyangwe vanhu vaienda kuMecca kana ndiani akaenda kunzvimbo dzese dzemakomo kwaShe Seba kana kweGomo reKellogg muzuva ranhasi, vanhu veTibet vakafamba kuti vawane revo huru yehupenyu. Uye sezvo iyo Pilgrim iri kana kuti marwendo ekusunungura. Saka nzvimbo dzekupedzisira dzave nyore nyore. Ehezve, iyo poindi iripo panguva yeCOVID-19 iri kunetsa. Asi kana iwe ukatarisa kumashure, zvave zviri nyore kwazvo. Vanhu vanogona kufamba uye, uh, kugutsa kana kuwana zvikwereti zvechitendero. Asi kupfuura izvozvo, patakaenda kune semutsvaki kana kuti tizviwanire izvo zvakataurwa naSocrates makore anoda kusvika 2,500 XNUMX apfuura, hapana dhayi pachako.
Saka ini ndawana vanhu vazhinji murwendo rwekuronga nzendo dzevanhu vanouya kuHimalaya, kunyangwe vanobva kunzvimbo dziri kure senge North America kana South America kana Europe dzimwe nguva ndaimboshamisika senge, vanouya neiko kuno? Vane migwagwa iri nani, dzimba hombe, dzakarongeka, munoziva, vakavaka nzvimbo. Asi chii chinotaridzika muNepal kana muHimalaya? Asi gare gare ndakanzwisisa apo pandakafamba navo, ndinoronga nzendo dzavo. Izvo hazvisi izvo chete izvo maziso akashama aigona kuona. Vanouya pano kuzoona zvinhu zvisingaonekwe nemaziso kana kunzwa simba, risingabatwe nemaoko. Uye kuenda, kunge, ndinogona kukuudza, hongu,
Vanhu vauya pano kuzotsvaga chavaisaziva kuti chiripo kana kuti kwete. Asi pavakauya, vakanzwa kuti pane chimwe chinhu chitsvene, kwete chete munguva dzemangwanani kana mugomo, asi kunyangwe mumigwagwa yeKathmandu. Izvi zvinondiyeuchidza mukadzi wandakasangana naye COVID isati yakiya. Aive makumi manomwe pamwe nemakumi manomwe nemashanu, makumi manomwe nemapfumbamwe kumashure panguva iyoyo kubva kuna chiremba weAustria, chiremba. Uye akauya kumurindi Mondo parwendo kweanenge mavhiki maviri, akatarisa muhotera. Uye akabva angobuda muhotera mazuva maviri chete ezvikamu zvevaenzi, saiti yechikwereti, uye kuenda kuchikomo padhuze neKathmandu. Uye ini ndaive neshungu yekuda kuziva, senge zvinomuunza kuna Katmandu uye sezvo ndichingoita marwendo ekushanya kana maviri mawebhusaiti zvinhu. Saka ndakaenda kunomuona paaive muParton uye ini ndakamukoka pamusoro pekapu yekofi.
Uye ini ndakabvunza zvine hunyoro, kwete senge, chii chinounza iwe kuna Katmandu uye nei usiri kufamba zvakanyanya? Iye ndokuti, wankers. Ndakauya pano kakawanda, kekutanga mukutanga makore makumi mapfumbamwe. Uye ndakaramba ndichidzoka uye pamwe urwu ndirwo rwendo rwangu rwekupedzisira. Kwete kuNepal chete, asi kunze kweEurope ndiri kurerutsa. Uye pamwe ini handizokwanise kutora nendege refu kutakura panguva iyoyo nenguva, kwanga kusiri kutyisidzira zvakadaro. Uye akati, chikonzero nei ndaida kupedzisa nzendo dzangu dzenyika dzese kana rwendo rwakareruka. Pandakauya pano kekutanga uye nzendo dzinoverengeka dzandakaita kuNepal, ndakawana chokwadi chinoshamisa pano mumakomo kana mumigwagwa yeKathmandu, kuti vanhu havana kumirira kufara. Uye ndakabvunza, saka iwe unorevei nezve kusamirira kuti ufare? Uye vakati, Ndakaona vanhu, kungave kuWestern world kana mune dzakasimukira, dzakasimukira budiriro kana nyika, vakamirira mufaro, ivo vanotenda kuti nzira yemafaro iri kumwe kunhu mune ramangwana riri kure, kwete iko zvino, kuponeswa kwe mirira zororo reiyo hupenyu, kana ivo vanoda kumirira kuti mota dzive dzinofara. Asi zvandakaona muKatmandu, vanongofara nezvose zvavanazvo, chero kwavari. Uye handina kumboona vanhu vakamirira kuti vafare. Uye ipapo ndakanzwa chiri chinhu chakadzika kwazvo.
Iye ndokuti, izvi ndizvo zvakandiunza pano. Uye zvechokwadi, vanhu vanouya kuNepal, asi makomo nekuti hongu, iyo Himalaya kana Everest inobata kutariswa. Iine icho chizere chinhu. Inodhonza vanhu kuenda kuNepal kana munzvimbo yeHimalaya. Asi kana vasvika pano, vanoona kuti zvinopfuura makomo. Uye zvino vanoramba vachidzoka nekuda kwevanhu. Saka muzviitiko zvakawanda, ndakaona kuti vanhu vanouya mufambi, vanouya kuNepal kuzotora mufananidzo wakanaka kubva kumusasa weGomo reEverest, kana kuenda parwendo rwekutevera. Asi pakupera kwerwendo, mazhinji acho, vanotora zvinopfuura mifananidzo. Ivo vanotora zvinopfuura izvo chiitiko. Kazhinji yenguva yavanowana rudzi irworwo rwemweya sezvavanofamba nekugara mukurasikirwa kwekutanga mudzimba dzetii kure nekunyaradza kwazvino, kana kana vachienda kunodya tii kana masikati Chidhinha, unova mupunga wakareruka nenyemba inogadzirwa neveko. varidzi vemba yetii. Uye ivo vanowana avo vana vakagwinya chaizvo vakavakirwa neakawanda ekudziya uye kunzwa zvakanyanya. Saka pane dzimwe nguva zvinovapa kuziva. Uyezve pakave nenyaya zhinji. Uh, Thomas, kana ndikakuudza ichangopfuura zvakadaro, kune akawanda, anga ari, maneja wepamusoro kubva kuMicrosoft uye aishanda semutungamiriri wekushambadzira muAsia, Pacific yakavakirwa muAustralia, akazopedzisira abva pazororo pabasa rake. mushure mekushanda zvakaoma kwemakore matanhatu. Uye fungidzira chii? Akangosarudza kuve bhegi. Akangotora kabhegi kake uye
Akananga kuna Armando. Akatora ndege, akamhara muKathmandu. Uye zuva raitevera aive mugomo retsoka remupikisi. Uye ipapo, akazobatana muBC tii imba nevanhu veko, sezvo anga achigadzika kana kuenda akananga kutenderera uye nzira yeanopikisa iyo yakagara kwevhiki nhatu. Uye sezvaakange achitaura nemuridzi wemba yetii, uye anga asati amboona rudzi irworwo, zvaibva kwatiri. Uye aifarira kuziva, chikoro chemuno chinotaridzika sei? Uye nerombo rakanaka akasangana nemurume. Aive munhu wekushandisa muzvikoro mudunhu iri. Saka aive murwendo rwekuongorora. Saka nekuda kwekuda kuziva, arcs iye muchinda. Saka ungafunga here kana ndikabatana newe nekuti ndiri kuda kwazvo kuona, ona zvikoro zviri kumusoro munzvimbo yemakomo. Iye ndokuti, zvakanaka. Kana iwe ukabatana neni kumusoro panguva yechitanhatu mangwanani, iri munzira chaipo.
Saka unogona kubatana neni. Saka murume uyu anongori mambakwedza kutevera uyu mukuru weNepali wezvekudzidzisa zvechikonzero ichocho. Uye mushure mekufamba inguva inguva yedu, vaive muchikoro uye mukusatenda kwake, ichocho chaisave chikoro chechikoro chaakambofungidzira munyika yekuMadokero. Vana vekare vakapakurwa pasi vana vakaita saSandra uye mugaba, handiti? Mbeu ine mhodzi padenga. Asi pavakapinda chikoro ichocho, vana vakafara kwazvo. Vakakwazisana neChirungu chakakwana. Mangwanani akanaka. Saka sezvavari, Chirungu chinodzidziswa mufaira. Saka chaiko kubva kupuraimari. Saka akafadzwa chaizvo uye akapihwa kushanya nemukuru wechikoro. Saka akaona mashoma makirasi, kwete akasiyana zvakanyanya. Iwo makirasi aive aripo, vana vakafara. Uye pakupedzisira, paakaunzwa mukombe wetii netii zvinonyanya kupihwa kwese kwaunoenda mune polyatomics zvakanaka muguta kana mukati, kumusoro mugomo.
Saka akapihwa kapu yetii uye, uh, uye akatarisa-tarisa uye aive akanaka kuziva nekuti haana kuona bhuku rimwe chete, bhuku rimwe chete kusvika panguva iyoyo. Uye akabva abvunza mukuru wechikoro. Saka une raibhurari here kana kuti une mabhuku akakomberedza? Hongu. Hongu tinayo. Uye akadanidzira uye mudzidzisi akauya mushure memaminitsi matatu. Takauya ne trunk, bhokisi resimbi rine muhombe kumashure rakavhurwa. Yakaburitsa mabhuku mashoma, bhuku rakasurukirwa rinotungamira mapuraneti rakasiiwa nevamwe Cracker, nyaya yerudo yeshamwari nekutsvoda, chaiko pabutiro, iyo yakanga isina kunyatsokodzera vana.
Ndine iro runyorwa runyorwa. Uye akabva aburitsa mepu, mepu yepasi apo USSR yaive nyika uye East Germany yaivepo, chimwe chinhu chakange chisisa shande. Rudyi. Vakanga vaichengeta zvakanyatsonaka, vakakiya zvakachengeteka moyo wake wakadzikira. Akatadza kutenda. Uye zvakamupa iye zvinhu zvakawanda. Uye akati kuna mukuru wechikoro, saka mungafunga here kana ndikakutumirai mabhuku mashoma? Mukuru wechikoro akati, "Ah, tinoda, nekuti tinoda kukurudzira tsika dzekuverenga pakati pevadzidzi ava. Saka akabva aenda kuTrek yake masvondo mashoma akatevera. Akapedzisa rwendo rwake, akadzokera kunaGodman zvakare. Uye akatsvaga email kune shamwari dzake. Kana uine mabhuku, ayo akanaka kuvana vechikoro, ndokumbira utumire kumba kwangu kuUS akadzokera kubasa kwake kuUS kuAustralia. Uye mushure memwedzi kana miviri, akawana email kubva kuna baba vake kuti mabhuku ese akatanga kuuya mashanu, gumi, uye imba izere nemabhuku.
Saka dambudziko raive rekuunza mabhuku iwayo kuNepal. Musha iwoyo uri mu [inaudible], asi akashandisa vaaibata navo uye akakwanisa kuunza mabhuku iwayo mugwara rake. Akaudza chikoro kuti attractor wataivimbisa kuunza mabook arikudzoka. Uye iye aingoda kuenda ndokutambidza mabhuku. Asi chakamushamisa, paakasvika padyo nemusha, akaona kuti paive nemhemberero huru iri kuitika. Paive nemaGates akagadzirwa nemabanana miti, garland kwaari, mumhanzi, mimhanzi yemuno. Saka musha wese wainge wakamirira kuti vamugamuchire kumusha kunonzi data rakasungwa. Saiye maneja wepamusoro weMicrosoft, akange atarisa mumahotera emhando yepamusoro, mwaka mina, kana iwe ukautumidza kapeti tsvuku, kutambirwa, asi kwete muhupenyu. Akanga anzwa kudziya kwakadaro, mutsa wechokwadi, kuonga kwechokwadi, uye paakagovera Canada pamusoro pemabhuku, iye ndokudzokera kuGarth bundle, iwe uchinge uchitaura wega, iye aizviudza iye zvakakwana, haugone kuita yako mukuru chero Rita, nekuti anga atove munhu akapfuma kwazvo pasi pano ndechekuti chinangwa chehupenyu hwako chinofanira kunge chiri chekuchinja hupenyu hwevana ava vanotorerwa mukana wekutanga wekuverenga nemabhuku.
Saka akaita sekudanwa kwehupenyu hwake. Uye paakadzokera kubasa kwake, akatofunga kuti handisi kuzoenderera mberi nezvandaiita. Ini ndoda kuchinja hupenyu hwevana. Saka mugore rechipiri, akasiya basa kuMicrosoft. GE yakatanga NGO inonzi nzvimbo yekuverenga, yakatanga kuburitsa mabhuku evana muChirungu nemitauro yemuno, maraibhurari, uye akazotevera zvikoro. Uye ikozvino imba ino yekuverenga yave NGO yepasi rose kana NGO yepasi rose yakatanga kutanga muNepal. Iye zvino inoshanda pasi rose muAfrica, muAsia, muSouth America uye iri kuchinja hupenyu. Saka poindi irwo nyore rwendo rwekutakura zvinhu kuNepal. Kwete chete akachinja mafambiro ehupenyu eano tracker. Ainzi John Wood, w OO D. Uye ndiye muvambi wekamuri yekuverenga. Iye zvino, ari kuita basa rinoshamisa, achimisa runako kuburikidza nedzidzo. Uye ndiwo mumwe wemienzaniso mizhinji. Hausi iwo wega muenzaniso, rwendo rwusingangoshandure mararamiro ehupenyu hwake, asi rwakachinja hupenyu hwevakawanda, vana vazhinji kutenderera pasirese. Ndiyo nyaya inonakidza
Dzoka, asi haukwanise kurega. Iwe wakamuudza nhau kana yako yekufamba nhau empire. Ndinoziva,
Zvakanaka, hachisi humambo, asi ndinofungidzira kuti ndaigona kuzviita kubva padanda. Kuregererei? Ndiri kureva, imi varume mune internet, handiti? Icho chinhu chepasirese, asi inonakidza nyaya punk. Uye izvi zvinosimbisa zvakare zvekare kushanya ibhizinesi rerunyararo uye vanhu bhizinesi. Haisi yemahombekombe ese ejecha jena nemaguta akanaka uye chikafu chinoshamisira uye mahotera emhando yepamusoro. Kune zvakawanda kune zvekushanya. Uye ini ndinofunga Nepal ndeimwe yenzvimbo idzi kwaunogona kuongorora izvi. Uye, e, ini ndingade kuwana yakawanda yenyaya dzako. Ndine chokwadi chekuti haisiriyo yega nyaya yaungataure nezveNepal. Uye, um, ini ndinofunga zvakanyanyisa kuve pane yedu podcast panguva ino. Uye, um, ini ndinokurudzira vaverengi vedu. Kana iwe uine chero mibvunzo, makomendi, kana iwe uchida kusangana nePankaj, ingo enda kune livestream dot, kufamba uye tinya pachibvumirano, uye isu tinofara kuendesa mubvunzo wako kana ruzivo rwako. Uye kana iwe uchinyatsoda kuenda kune imwe mhando yerwendo, kwete chete kuti uongorore par, asi kuti uzviongorore paunenge uri muNepal, iyo pancake ndiye munhu chaiye wekutaura naye. Ndinofunga, maita basa rekunakidzwa. Ndinofanira kugara. Uye ndinovimba tinewe zvakare, ha, munguva pfupi, uye ndokumbirawo uti, ramba uchikurukura uye, uh, nakidzwa nezuva rako. Uyezve Paul, uye nezvimwe zvekudya zvinonakidza. Ndinonyatsosuwa chikafu. Icho chimwe chinhu chikuru pamusoro pemukomana.
Ndatenda, Thomas. Zvakanaka chaizvo. Uye, uh, ndine chokwadi chekuti tinogona kubatsira vanhu vazhinji mumanzwi emukati ekutsvaga. Ndatenda kubva kuHimalaya. Ndatenda kubva kuna Katmandu. Zvakanaka. Zvichengetedze. Chisarai. Chisarai. Ndatenda. Chisarai.
Kufungisisa kwakawana mukurumbira wakakura mumakore gumi apfuura. Kune akawanda nzvimbo dzekufungisisa mukati nekukomberedza Kathmandu.
Nepal Vipassana Center inomhanya kosi dzemazuva gumi pakufungisisa. Iyo yakaoma regimen inoteverwa pano mukati kosi yese. Kufungisisa kwezuva nezuva kunotanga na4: 30 mangwanani, uye kunyarara kunochengetwa kwemazuva gumi ese. Kunyoresa kana kutora kabhuku kosi, shanyira iyo centre hofisi yeKathmandu (Sun-Fri 10 am-5.30 pm) muchivanze cheJyoti Bhawan, muKantipath. Dzidzo dzese dzakabhadharwa nemipiro.
Vipassana ndeimwe yemaitiro ekare ekufungisisa. Yakareba kurasika kuhunhu, yakawanikwazve neBuddha anopfuura makore mazana maviri nemazana mashanu apfuura. Vipassana zvinoreva 'kuona zvinhu sezvazviri chaizvo'. Iyi ndiyo nzira yekuzvinatsa nekuzvionera. Mumwe anotanga nekucherechedza mweya wekufema senzira yekutarisisa. Nekuziva uku kwakasimba, mumwe anoenderera mberi nekucherechedza shanduko yemuviri nepfungwa uye nekuona chokwadi chepasirese chekusagadzikana, kutambura uye kuwana mamiriro ekuzvitutumadza.
Iyo nzira yese (Dhamma) mushonga wepasirese wezvinetso zvepasirese uye haina chekuita nechero chitendero chakarongeka kana kupesana. Neichi chikonzero, inogona kuitiswa zvakasununguka nevose pasina kupokana kwerudzi, caste kana chinamato; mune chero nzvimbo, uye chero nguva uye zvicharatidza zvakaenzana kubatsira kune vese.
Vipassana ndiyo 'hunyanzvi hwekurarama' iyo inosunungura munhu kubva kune zvese zvisina kunaka zvepfungwa, sekushatirwa, makaro nekusaziva. Iyi tsika inovandudza simba rakanaka, rekusika rekuvandudza munhu uye nzanga. Iyo Vipassana Center iri muBudhanilkantha padhuze nemusuwo weShivapuri National Park.
Nepal Mitemo yekupinda nekuda kwe COVID-19
Iko hakuna ruzivo rwakagadziridzwa paNepal Hurumende Webhusaiti, kusanganisira iyo yepamutemo Nepal Tourism Board webhusaiti maererano nezvekusvika zvinodiwa panguva yeCOVID-19.
Mumiriri weUS muNepal ane ruzivo runotevera:
Hurumende yakazivisa Nyamavhuvhu 14 kuti zviteshi zvese zvekupinda muNepal zvinoramba zvakavharwa kusvika pakati pehusiku husiku hwaGumiguru. Kune huwandu hwakaganhurirwa hwemapoinzi ayo vagari vemuNepali vanodzoka vanobvumidzwa kupinda.
Hapana vekunze vanobvumidzwa kupinda muNepal panguva ino. Hurumende yeNepal yakabvumidza kusarudzika kwesangano rezvematongerwo enyika, renyika dzese, uye nevamwe vekunze vasiri vehurumende.
Iyo Center for Disease control inoyeuchidza vanhu nezve njodzi muNepal yeCOVID-19 yakakwira.